Izwe eziphikisanayo nemikarisomraro, umlando wasendulo okusezingeni eliphezulu art. China sidilizwa ithwala ekhethekile yayo yalelozwe, ifilosofi kanye nolwazi. Kuyinto lizwe kuphela lapho isiko kanye isimo ngokuthula ukuhlangana nomunye, ngaphandle ekuvimbela ukuthuthukiswa minyaka emine zeminyaka ekugcineni.
Ngokuthakazelisayo, igama "China" likhona kuphela ngezilimi Russian futhi Ukraine. Leli gama livela egameni isizwe Khitan, owayehlala eliseMpumalanga Ekude, ngasemingceleni ye-ngalesi simo. EYurophu lehla ngokushesha inani uMbuso Celestial ngokuthi "China" ezaziwayo. Leli gama endaweni lisuselwa egameni Chinese Qin Dynasty. Ngaphansi koMbuso waseRoma, elethula Izwe Elidala ngosiko empumalanga, wabizwa ngokuthi "ezweni kasilika." Kodwa-Chinese ngokwabo shayela ezweni lawo Zhong th - Central, Ephakathi Kingdom - China noma izwe.
Isayensi e China wasendulo kakhulu athuthukile. Ngesikhathi elapho babekholelwa ukuthi izwe labo iphakathi le planethi, ngesikhathi iphuzu esiphezulu ezweni. Yingakho igama "Kingdom Ephakathi." izwe lasendulo matasa indawo ephakathi baseMpumalanga China nabaseNingizimu Yellow Sea, esigodini umfula iYangtze River, ezingwadule futhi Alashan Gobi. Umngcele wentshonalanga luchazwa ngegama backbone enamandla Tibet. Lokho China lasendulo nososayensi yayo onginike emhlabeni inqwaba ukuvuleka, ngaphandle kwalokho kakho izindleko, indoda yesimanje. Compass, iphepha, ukunyathelisa, Umsizi, ngobumba, usilika - akusiwona wonke ngezenzo zabo.
Ikakhulukazi ingumuthi omuhle lakhiwe lapha. Ngo eChina yasendulo banaka kakhudlwana ngokuvumelana umzimba nomphefumulo, ngoba babekholelwa ukuthi izifo zonke kuba eduze oluhlobene nezikhungo energy. Ngesisekelo le mfundiso, futhi abaningi uhlelo sokuphulukiswa ezidume namuhla lusekelwe. Man ubonakala uma liqhathaniswa nendawo encane endaweni yonke, okuyinto buhlobene eduze ke nolalela imithetho yayo. Kuyinto kusukela kuleli zwe wafika Europe izimfundiso Feng Shui, incwadi ukubhula izinguquko, ubuciko eziningi bokulwa.
China sidilizwa - izwe nokuzwa amazing kanye nemvelo omangalisayo. Kunezinto eziningi zezakhiwo kabani yobudala kukalwa ezinkulungwaneni zeminyaka. Kukhona izimangaliso zomhlaba, ezemvelo nezibangelwa abantu ezenziwe. Futhi zonke lezi zindawo ezithakazelisayo umphelelisi nomunye.
Leli zwe ezinabantu wayihlahlela emfuleni. Valley abaningi babo bangabantu ezilungele. Kusukela kudala sihlakulele irayisi Chinese, unyaluthi kamalibhele, itiye kuvuna, kamalibhele ukhuni esetshenziswa futhi lacquer izihlahla. Of ubuhle yezandla izakhamuzi eziningi ziye baphumelela zobumba, zobumba ukukhiqiza, ubucwebe. Kube esetshenziswa ithusi, ithini nickel, igolide nesiliva.
China Ingxenye yesakhiwo njengoba ngo-1500 BC ephethwe ngenkasa izinhlelo, engewona nokho kakhulu eliphansi kuya yesimanje. Khona-ke wazalwa wokuqala Akumangalisi eziyinkimbinkimbi uhlelo lokubhala ngokusebenzisa izinhlamvu. Nge China lasakazekela yonke emhlabeni ubuTao futhi ubuConfucius.
Kunzima overestimate okomnikelo China lasendulo ekuthuthukiseni impucuko womuntu. Baningi esikukweleta amaShayina!
Chernihiv-Seversky ubukhulu: ezindawo indawo, ukuphathwa, emadolobheni amakhulu
Portrait zomlando Vladimira Monomaha - Prince Kiev
U-hare ulungiselela kanjani ubusika, kwenzekani ukuze usinde?